मनास्लु पदमार्ग मर्मतको पर्खाइमा चुम तथा नुव्रीबासी | .:: Welcome || Paryatannews
Home » विचार » मनास्लु पदमार्ग मर्मतको पर्खाइमा चुम तथा नुव्रीबासी
गोरखा । उत्तरी गोरखामा दुई वटा मनोरम पर्यटकीय उपत्यका छन् – चुम तथा नुव्री । चुम उपत्यकामा चुम्चेत र छेकम्पार गाविस पर्छ भने नुव्रीमा बिही, प्रोक, ल्हो र सामागाउँ पर्छन् । यी गाविसहरु हिमालपारिका क्षेत्र हुन् । सरकारले मनास्लु क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा राखेको छ । प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एमक्याप० ले यस क्षेत्रको समग्र गतिविधिबारे जानकारी राख्दैआएको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले बर्खा सकिएपछि अबरुद्ध पदमार्ग खोल्न सकिने बताउनुभएको छ । सरकार तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा पदमार्गहरु खोलेर पर्यटक तथा स्थानीयवासी सहजै हिड्न सक्ने बनाइने उहाँले बताउनुभयो । पदमार्ग मर्मत गर्न बजेटको अभाव भएको छ । पर्यटन रोयल्टी शीर्षकमा आएको बजेटले भएपनि पदमार्ग खोलिने उहाँको भनाइ छ ।
मनास्लु पदमार्ग मर्मतको पर्खाइमा चुम तथा नुव्रीबासी Reviewed by Shiva Shrestha on Sep 02 . गोरखा । उत्तरी गोरखामा दुई वटा मनोरम पर्यटकीय उपत्यका छन् – चुम तथा नुव्री । चुम उपत्यकामा चुम्चेत र छेकम्पार गाविस पर्छ भने नुव्रीमा बिही, प्रोक, ल्हो र सामागा गोरखा । उत्तरी गोरखामा दुई वटा मनोरम पर्यटकीय उपत्यका छन् – चुम तथा नुव्री । चुम उपत्यकामा चुम्चेत र छेकम्पार गाविस पर्छ भने नुव्रीमा बिही, प्रोक, ल्हो र सामागा Rating: 0